CMO-on-the-Go: Olee otu ndị ọrụ Gig nwere ike isi baara gị uru Ngalaba Ahịa | Martech Zone
Ogologo oge nke CMO karịrị afọ 4- nke kacha nso na C-ụlọ. N'ihi gịnị? Site na nrụgide iji nweta ihe mgbaru ọsọ ego, ọkụ na-esote ihe a na-apụghị izere ezere. Nke ahụ bụ ebe gig ọrụ na-abata. Beingbụ onye a CMO-na-na-Go na-enye ndị isi ahịa ohere ịtọọ oge ha ma were naanị ihe ha maara na ha nwere ike ijikwa, na-ebute ọrụ dị elu na nsonaazụ kacha mma maka akara ala.
N'agbanyeghị nke ahụ, ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-eme mkpebi dị oke mkpa na-enweghị uru nke echiche CMO, n'agbanyeghị nka na mmụba nke ụlọ ọrụ ha na-eweta na tebụl. Nke ahụ bụ ebe nnukwu ndị ọrụ gig na-egwu egwu. Ha nwere ike ije ozi dị ka CMO maka ụdị dị iche iche, na-echekwa ọnụ ahịa ego nke CMO onye ga-anọ naanị afọ ole na ole.
Igwe obere CMO dị iche na ịbụ onye ndụmọdụ; ọ gụnyere ịmekọrịta C-ụlọ na mbadamba dịka akụkụ nke otu, yana ijikọta miri emi na arụmọrụ kwa ụbọchị. Dịka CMO nke na-esonye na nnukwu akụ na ụba, enwere m ibu ọrụ nke yiri nke CMO oge niile. M na-eduga ndị ahịa ịzụ ahịa iji nweta ihe mgbaru ọsọ dị mma ma kọọrọ onye isi oche. Ana m eme nke a na ntọala pere mpe. Dị ka ọtụtụ ndị na - arụ ọrụ akụ na ụba, achọtala m ọrụ site na kọntaktị nke kọntaktị m mepụtara mgbe m nọ n'ụzọ ọrụ ọdịnala, gụnyere ịbụ obere akụkụ CMO maka Abuelo, Ngalaba Kuki na ndị ọzọ.
Gịnị Mere Gig Ndị Ọrụ?
Otu n’ime ajụjụ ndị a na - ajụkarị m bụ: Gịnị ka ndị ọrụ gig na - eweta na ngalaba azụmaahịa? Otu uru dị ukwuu bụ na onye ọrụ gig na-ewepụta ọhụụ ọhụrụ mgbe ọ sonyere ndị ọrụ ogologo oge. Ndokwa a na-anapụta ụwa abụọ kachasị mma - "anya ọhụrụ" site na ndị bịara ọhụrụ na ihe ọmụma ụlọ ọrụ site na otu oge.
Dabere na Akwụ ụgwọ, ụgwọ etiti maka CMO bụ $ 168,700. Ọtụtụ ụlọ ọrụ, mmalite ọkachasị, enweghị ike ịkwụ ụgwọ mmadụ na ụgwọ ahụ oge niile, mana gig CMO nwere ike iweta otu afọ nke ahụmịhe na onye ndu na obere ụgwọ. Ọ bụrụ na otu ndị na-ere ahịa na-adịgide adịgide na-eguzogide ọnwụnwa iji mesoo gig CMO ahụ dị ka onye si mba ọzọ ma tinye akụkụ oge na mkpebi niile dị mkpa, ụlọ ọrụ ahụ ga-enweta uru zuru oke nke onye nwere ahụmịhe na onye rụzuru ọrụ na-enweghị ọnụahịa dị oke ọnụ.
Ọzọ uru bụ na a gig ndokwa nwere ike ikwe ka ụlọ ọrụ na uloru nwalee ụgbọala a ọzọ na-adịgide adịgide mmekọrịta. Ezie na ọtụtụ gig ọrụ (dị ka m) bụ zuru okè afọ ojuju na-arụ ọrụ na a nkwekọrịta ndabere na kpọrọ mgbanwe na iche iche, ndị ọzọ ga-abụ na ọbịa na-abịa n'ụgbọ zuru oge maka nri ọnọdụ. A gig ndokwa na-enye ohere ma ndị ọzọ inyocha na tupu nkwa.
Ndụmọdụ maka CMO na-achọ ime mgbanwe
Y’oburu na ibu onye CMO n’ebido nwepu obi oku, o nwere ike buru oge inyocha otu ị gha esi weta ulo ahia ahia gi n’ime nkwekorita. Gakwuru ndị ọrụ ibe gị ma mee ka ha mara na ị nwere mmasị n'ịgba ọkpọ. Echefukwa itinye ndị na-ere ahịa na mgbasa ozi gị - ha na-enwekarị echiche nke ọtụtụ nzukọ ma nwee ike ịnye ndu mgbe ndị isi ụlọ na-ebute oche na-emeghe.
Otu nke n'elu mgbochi e zoro aka na ejechi akwụkwọ ọrụ bụ ego unpredictability. Tupu iwere ihe a na-emenụ, gbaa mbọ hụ na ị dịla njikere maka ịkwụ ụgwọ ego na-aga na nke na-agaghị apụ apụ na-arụ ọrụ na-anaghị akwụ ụgwọ. Gbaa mbọ hụ na ị jikerela ịkwado ego na nke mmụọ iji gaba n’ihu n’oge nsogbu. Mgbe onye na-azụ ahịa na-abanye n'ahịa akụ na ụba na-emeghe anya, ọ nwere ike ịbụ ndụ na-eju afọ ma na-akwụghachi ụgwọ.
Mgbe òtù dị iche iche nabatara uru nke ịgbazigharị ndị isi ahịa na-enweghị ọrụ, mmekọrịta ahụ nwere ike ịba uru. Gig CMO nwere ike ịnye nghọta ọhụrụ, nka bara uru yana mmetụta dị mma na akara ala. N'aka nke ya, onye ọrụ gig nwere mgbanwe, ọrụ na-akwụghachi ụgwọ na obere ike ọgwụgwụ.
Tags: onye isi ahiaKeduụgwọ maka ụgwọcmo na ọ laagig akụndị ọrụ gig